Magaca Magaca Raadinta | Martech Zone
Isniin, Maarso 29, 2021 Thursday, April 1, 2021 Douglas Karr
Haddii aad isku dayeyso inaad raadiso magac domain ah oo ku saabsan sumcadda shaqsiyeed, meheraddaada, alaabtaada, ama adeegyadaada, Namecheap waxay kuu soo bandhigeysaa raadin weyn oo lagu helo mid:
Raadi domain ka bilaabmaya $ 0.88
waxaa suuro galiyay Namecheap
Talooyin ku saabsan doorashada Magaca Domain
Waa kuwan fikradayda shaqsiyadeed ee ku saabsan doorashada magac domain:
Gaaban ayaa ka fiican - markii magacaaga gaaban yahay, xusuustiisu way sii fududaanaysaa waana sahlan tahay in la qoro markaa isku day inaad raacdo degel gaaban. Nasiib darrose, inta badan xarafyada ka yar 6 xaraf muddo dheer ayaa horay loo sii haystay. Haddii aadan awoodin inaad hesho hal magac oo gaagaaban, waxaan isku dayi lahaa inaan yareeyo tirada shibbaneyaasha iyo ereyada ugu yaraan… markale, si aan isugu dayo inaan xusuus u ahaado. Tusaale ahaan, Highbridge waxaa la geeyay meel kasta oo heer sare ah, laakiin waxaan ahayn shirkad la-talin sidaa darteed waxaan awooday inaan iibsado labadaba Highbridgela-talin iyo highbridgela taliyayaal names magacyada domain dheer oo dhawaaqyo badan leh, laakiin xusuus mudan maxaa yeelay waxaa jira laba erey oo keliya.
TLDs kala duwan ayaa la aqbalaa Dabeecadaha ayaa sii wada inay isbedelaan marka loo eego adeegsadayaasha internetka iyo isticmaalkooda magacyada domain. Markii aan soo qaatay domain-heer sare ah .zone (TLD), dadka qaar waxay igula taliyeen inaan taxaddar sameeyo many in dad badan laga yaabo inaysan aaminin TLD oo ay u maleeyaan inaan ahaa nooc ka mid ah mareegaha xun. Waxaan u xushay sababta oo ah waxaan doonayay martech inuu yahay cinwaanka, laakiin dhammaan TLD-yada kale horay ayaa loo qaatay. Waqtiga dheer, waxaan u maleynayaa inay aheyd talaabo aad u wanaagsan oo taraafigeygu kor ayuu u kacay markaa waxay u qalantay halista. Kaliya maskaxda ku hay in sida qof u qoro domain aan lahayn TLD, waxaa jira amar isku day ah oo isku day ah… haddii aan qoro shahiid oo aan ku dhufto gala, .com ayaa noqon doonta isku daygii ugu horreeyay.
Ka fogow jiingado - iska ilaali jiifka marka aad iibsaneysid magac domain… maaha inay yihiin wax taban laakiin dadku iloobaan. Waxay si joogto ah ugu qori doonaan boggaaga la'aantiis waxayna u badan tahay inay gaaraan dadka khaldan.
Keywords - waxaa jira iskudhafyo kala duwan oo macno u samayn kara ganacsigaaga:
Location - Haddii meheraddaadu had iyo jeer noqoto mid maxalli ah oo laga shaqaysiiyo, iyadoo la adeegsanayo magaca magaaladaada magaca waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu kala sooci karo qaybtaada kuwa kula tartamaya.
brand - Calaamaduhu had iyo jeer waa kuwo faa'iido leh in la isticmaalo maxaa yeelay badanaa si gaar ah ayaa loo higgaadiyaa, umana badna in mar hore la qaato.
Mawduuc - Mawduucyadu waa hab kale oo weyn oo lagu kala sooci karo naftaada, xitaa adoo wata summad adag. Waxaan u hayaa xoogaa magac magac domain ah fikradaha mashruuca mustaqbalka.
Language - Haddii eray Ingiriis ah la qaato, iskuday inaad adeegsato luqado kale. Isticmaalka ereyga Faransiiska ama Isbaanishka ee magacaaga domain waxay ku dari kartaa xoogaa pizazz ganacsigaaga sumcadda guud.
Kawaran Haddii Domainkaaga Laqaato?
Iibsashada iyo iibinta magacyada domain waa ganacsi faa'iido badan laakiin uma maleynayo inay tahay maalgashi muddo dheer soconaya. Marba marka ka dambaysa ee TLDs la helayo, fursadda lagu iibsado domain gaaban TLD cusub ayaa sii fiicnaanaya oo ka sii fiicnaanaysa. Daacadnimo dhan, xitaa qiime uma siinayo qaar ka mid ah cinwaannimadayda sidii aan mar uun ku samayn jiray oo waxaan u oggolaan lahaa iyaga inay u baxaan lacag doollar ah maalmahan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay ganacsi ku adkaysanaya iibsashada domain gaaban oo horeyba loo qaatay, badankood waxay ku xiran yihiin dalab iyo iibin. Taladaydu waxay tahay si fudud inaad samirto oo aadan ku waalan dalabyadaada. Waxaan kala gorgortamay iibsashada dhowr meelood oo ganacsiyo waaweyn oo aan rabin in la aqoonsado oo waxaan ku helay qayb ka mid ah kharashka iibiyuhu weydiinayo. Waxaan sidoo kale marwalba hubiyaa si aan u arko haddii marinnada bulshada loo heli karo iyaga iyo sidoo kale inaan keydiyo. Haddii aad awood u leedahay inaad hesho Twitter-kaaga, Instagram-ka, Facebook-ga, iyo naanaysta kale ee bulsheed ee u dhigma bartaada, taasi waa hab fiican oo lagu ilaalin karo summad joogto ah!
Shaacinta: Qalabkaan wuxuu adeegsanayaa aqoonsigeyga ku xiran Namecheap.